Wedzera Martech Zone
Chipiri, Gunyana 1, 2013 NeChishanu, Gunyana 27, 2013 Douglas Karr
Makambani haatore mukana wesimba rine simba ravanaro mukati kana zvasvika pasocial media. Isu tinotarisa nguva dzese makambani anoshandisa 1 kana 2 yemagariro venhau vanhu kuti vatungamire kusangana kwemasocial media. Vanoshanda nesimba, vanogovera zvirimo, asi ivo vari mubhuvhu ravo kana zvasvika pakusimudzira zvirimo. Kana iwe uchida kukwikwidza chaizvo, nei usiri kushandisa vashandi vako kuti vakubatsire kusimudzira huvepo hwako pamhepo?
Wedzera inobvumidza makambani kuongorora uye kugadzirisa kwavo kwehukama maratidziro nekuita kuti zvive nyore kune vashandi kugovana zvinonakidza zvemukati uye nyore kune vatengesi kuteedzera kutora kwavo uye kusvika.
Iko kunyorera kwakanaka uye kuri nyore. Vashandi vako vanobatanidza masocial network, wedzera browser yebrowser, uye login. Pabharaki reruboshwe, iwe unonyora zvaunoda kugovaniswa, wedzera chinyorwa chakavanzika chevashandi vako, wobva wadzvanya kukurudzira! Iye zvino mumwe nemumwe wevashandi vako achaona zvemukati zvekusimudzira mune yavo skrini:
Anoshanda sei Addvocate?
Ziva - Vashandi vanopinda muAdvococate system uye vanogadzira chimiro, vachikuratidza chaizvo kuti ndiani anomiririra chiratidzo chako pasocial. Ese ma profiles anogona kurongeka neboka, kutsvagiswa nemazita, Twitter mubato, dhipatimendi kana kunyangwe hunyanzvi hwakagadzirirwa kuti uwane yakazara-uye yakagadzirirwa-kutarisa kune yako network. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kupusa kuteedzera kuti ndiani ari kushingaira, vanhu vangani vavari kuita, uye kuti munhu wega wega anoronga sei mukati mesangano rako.
Amplify - Kana mushandi awana chimwe chinhu chinonakidza online, vanongobaya kuwedzera kweAdvocate mubrowser yavo yekushandisa kuratidza chirevo kune vavanoshanda navo, vachiwedzera tsananguro pfupi yezviri mukati uye nei zvichikosha. Sevashandi pavanotarisa nzizi dzavo, vanogona kusarudza zvavanoda kugovana nemambure avo, vataure pane zvatumirwa, uye voenderera mberi nehurukuro nekuratidza zvimwe zvirimo zvinoenderana.
eresera (Enterprise Edition Chete) - Kana mushandi akangoratidzira posvo, inopinda mumutsetse wekuenzanisa, uko mamoderita ako anoongorora uye vanobvumidza kuona chete zviripo zvakagovaniswa. Moderators vanogona zvakare kuronga kana zvinyoreso zvapinda murukova, uye ndokurudzira zvemukati kune vamwe vanhu, mapoka, kana madhipatimendi kukurudzira kugovana kwakanaka.
Nhamba - Addvocate's analytics rega iwe uteedzere zvese, kusanganisira mapfupi ma URL uye makodhi emushandirapamwe, kuyera kwako kwechokwadi kusangana kwevanhu. Iwe unogona kuziva chaizvo zviri kutaurwa nevanhu, maratidziro avo ari kupindura sei, uye ndiani kambani yako yemagariro venhau superstars vari.
Optimize - Ramba uchikurisa kusvika kwako uchishandisa Addvocate's analytics kugadzirisa uye kunatsiridza yako mameseji. Gadzira zvakagadzirirwa zvemukati kuti uwane mari pane dzakakurumbira misoro, tarisa iwo anonyanya kushanda mazuva evhiki, uye fanera yezvinyorwa kune vako vane mukurumbira vashandi.
Gavhuna (Enterprise Edition Chete) - MuAdvococate system, vashandisi vanokoka uye vanobvumidza kuwana maakaundi akaiswa mazita. Kana vachinge vasiya sangano, izvi zvakaburitswa zvitupa zvinobva zvapera, zvichibvumidza kuwana protocol kuita nyore.
Wedu Wahwina kuAgent Project Management: Brightpod
Gumiguru 1, 2013 pa 9:22 AM
Kutenda nekugovana Doug! Yakanga iri kuverenga kunotyisa! Kutenda nekupa misoro kumusoro!